Dharka ugu dhumucda iyo dhuuban ee soo laabaya mashiinka xirxirida Soo -saaraha iyo Warshadda | UBL
Funaanado qaro weyn oo dhuuban, dhididka, jaakadaha, dharka kuleylka, dhididka, shaatiyada, jaakadaha, surwaalka, iwm
1. Qalabkan taxanaha ah wuxuu ka kooban yahay tusaalaha aasaasiga ah ee FC-M412A, kaas oo loo adeegsan karo in mar loo maro marna bidix iyo midig, loo laabto mid ama laba jeer oo dheer, si otomaatig ah loo quudiyo bacaha oo si toos ah loo buuxiyo bacaha.
2. Qaybaha wax -qabadka waxaa lagu dari karaa sida soo socota: qeybaha shaabadaynta kulul ee otomaatiga ah, qaybaha xirmidda jeexitaanka otomaatigga ah, qaybaha is -haynta tooska ah.Qeybaha waxaa lagu dari karaa iyadoo la raacayo shuruudaha isticmaalka.
3. Qayb kasta oo ka mid ah qalabka waxaa loo qaabeeyey si waafaqsan shuruudaha xawaaraha ee 600PCS /H. Isku -darka kasta wuxuu ku gaari karaa xawaarahaan hawlgalka guud.
4. Is -dhexgalka soo -gelinta aaladda waa is -dhexgalka taabashada shaashadda taabashada, kaas oo kaydin kara ilaa 99 nooc oo isku -laalaab dhar ah, xirxirid, xirid iyo xirmooyin hawlgal xulasho fudud.
Laabista bacaha daabacaadda goynta kulul iyo calaamadaynta
laablaabida baalasha ku dhejinta shaabadaynta
laablaabida xirxirida goynta kulul kulul
laablaabida baalashka jeexa shaabadaynta
Dhar qaro weyn oo dhuuban oo isku laabma, bacda, jeexjeexa, shaabadaynta, is -dulsaarka
Nooca FC-M412A, Midabka mashiinka waa la beddeli karaa
Nooca dharka Funaanad, shaadhadhka Polo, shaadhka tolidda, shaatiga dhididka, shaatiga, surwaalka gaagaaban, dhididka iwm.
Bacda lagu dabaqi karo bacda cad, bac caag ah
Ballaca dharka Kahor isku laabidda: 300 ~ 900mmKa dib isku laabid: 170 ~ 380mm
Dhererka dharka Kahor isku laabidda: 400 ~ 1050mmKa dib isku laabid: 200 ~ 400mm
Cabbirka mashiinka iyo miisaanka 7200mm*W960mm*H1500mm; 500KgWaxaa lagu furi karaa qaybo badan
1. Naqshadda qaab -dhismeedka qalabku waa cilmi, fudud, isku -halayn sare. Hagaajinta, dayactirka si dhakhso leh oo sahlan, fudud oo sahlan in wax la barto.
2. Qaabka aasaasiga ah ee qalabka iyo isku -darka qayb kasta ayaa ku habboon, isku -darka kasta, qalabku wuxuu noqon karaa darajo koritaan la gaari karo 2 mitir oo jirka gaadiidka ah, wiishka heerka warshadaha ayaa kor iyo hoos u qaadi kara.
2-bidix iyo midig isku laabid
6-dhammayn isku laabid
Baakadaha iyo dhoofinta
Hore: Suudhka Ilaalinta Mashiinka baakadka laabista Qalliinka qalliinka
Xiga: Dhar khafiif ah oo isku laabaya mashiinka xirxirida
Mashiinka Xirmada Dharka, Calaamadiyaha Dhalada, Calaamadiyaha Dhalada Khamriga, Mashiinka Calaamadinta Dhalada, Labeller Dhalo, Calaamadiyaha Dhalada Beerka,